Alexa dia tonga amin'ny takelaka Amazon, ny Amazon Fire 7 sy 8 HD | Vaovao momba ny gadget
Alexa dia tonga amin'ny takelaka Amazon, ny Amazon Fire 7 sy 8 HD
Ho fanampin'ity zava-baovao ity, ny takelaka Amazon dia mahazo fanatsarana ny hery ary mihena kely ny lanjany. Raha ny marina dia miatrika fanatsarana antenaina mandritra ny fotoana maharitra izahay ary izany dia ny fananana Alexa amin'ny takelaka misy ny orinasa dia zavatra mety ho tonga talohan'izay. Na izany na tsy izany, ny fanatsarana dia tsy mifantoka manokana amin'izany ary hitantsika fa nampiana izy ireo fiovan'ny fitaovana anatiny Izay manampy fanampiny ho an'ireo takelaka lafo vidy efa mahaliana avy any Amazon.
Amin'izao fotoana izao dia avelanay miaraka aminao ny famaritana sy ny vidin'ny Afo vaovao ary hanomboka izahay ho an'ny modely Fire 7, izay no kely indrindra sy mora vidy indrindra any Amazon.
Fampisehoana 7-inch 1024 x 600 pixel
1,3 GHz processeur quad-core
8 na 16 GB fitehirizana
SD slot hatramin'ny 256GB
Fakan-tsary 2 MPX aoriana; fakantsary eo aloha VGA
Ny refy 192 x 115 x 9,6 mm sy ny lanjan'ny 295 g
Fampiasana hatramin'ny 8 ora (araka ny filazan'ny mpanamboatra)
Mikasika ny vidiny sy ny fisian'ny ny Fire 7 raha ny maodely 8GB dia ahitantsika azy avy amin'ny 69,99 euros amin'ny vidiny ofisialy miaraka amin'ny tolotra sy 84,99 tsy misy azy ireo. Ary ho azy maodely lehibe kokoa 16 GB izay horesahintsika 94,99 euros. Momba ny fisian'ny vokatra amin'izy rehetra, na ny Fire 8 HD aza dia alefa 7 Jona ho avy izao.
Ho an'ny maodely Fire 8 HD dia 8 santimetatra ny efijery ary ny ambiny amin'ny famaritana dia mahery vaika kokoa noho ny maodely 7. Ireto ny angon-drakitra ny Amazon Fire 8 HD vaovao:
Fampisehoana 8-inch 1280 x 800 teboka
16 na 32 GB fitehirizana
Karatra SD hatramin'ny 256GB
Dual band WiFi, feo Dolby Atmos Dual
Refes 214 x 128 x 9,7 mm lanja 369 g
Fampiasana hatramin'ny 12 ora (araka ny filazan'ny mpanamboatra)
Raha ny fitsipika dia somary matanjaka kokoa ity kinova ity ary afaka mahita azy isika avy amin'ny 109,99 euro miaraka amin'ny tolotra manokana ary ho an'ny 124,99 euro tsy misy azy ireo amin'ny maodely 16 GB. Avy eo somary lafo kokoa ny vidiny ao amin'ilay maodely 32 GB mahatratra 129,99 euro miaraka amin'ny tolotra manokana ary 144,99 euro tsy misy azy ireo. Ny iray amin'ireo tolotra manokana dia midika doka fotsiny ary raha misafidy tsy misy tolotra manokana isika dia tsy hanana doka avy any Amazon.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Amazon » Alexa dia tonga amin'ny takelaka Amazon, ny Amazon Fire 7 sy 8 HD
Android Go, solon'i Google ho an'ny fitaovana farany ambany
Google Photos mivoatra miaraka amin'ny vaovao mahaliana